Early Learners Department (Kindergarten, Pre-K & School-aged Child Care) / Connect to Kindergarten (
2021 Summer Programs & Resources
Columbia Regional Program
System Planning And Performance
Athletics - College-Bound Student-Athletes
CIA (Conectando, Instruyendo, y Aprendiendo)
Native Montessori Preschool
Pre-K Screenings (ASQs)
2021/22 PPS Online Learning Academy
Connect to Kindergarten Event Dates
Connect to Kindergarten Event Dates (Chinese)
Connect to Kindergarten Event Dates (Russian)
Connect to Kindergarten Event Dates (Somali)
Connect to Kindergarten Event Dates (Spanish)
Connect to Kindergarten Event Dates (Vietnamese)
School-aged Child Care
Connect to Kindergarten (Somali)
Ku soo dhowow Fasalka Xanaanada PPS!
Haddii ilmahaagu noqon doono 5 jir kahor Sebteember 1, boggan adiga ayaa laguugu talagalay
Inta u dhaxeysa Abriil 6 iyo dhammaadka sannad dugsiyeedka, dhammaan dugsiyadu waxay qaban doonaan labo ama seddex kulan oo onlayn ah oo ah dhacdooyinka ku xirnow fasalka xanaanada. Dhacdooyinkan ayaa qoyskaaga u ah fursad weyn oo ay wax badan kaga bartaan dugsigooda lana kulmaan macallimiinta, shaqaalaha, iyo qoysaska kale. Maadama ay dhacdooyinku yara kala duwan yihiin, fadlan eeg bogga internetka ee Fasalka Xanaanada ee dugsigaaga si aad wax badan uga oggaato. Booqo pps.net, dugsiyada, magaca dugsiga, Fasalka Xanaanada.
Si aad ugu soo biirto dhacadada Ku Xirnow Fasalka Xanaanada ee Onlaynka ah ee dugsigaad rabtid, kaliya guji liinkiga dhacdada ee aaladdaada (taleefanka, ipad, chrome book, kombiyuutarka) marka la gaadho taariikhda/waqtiga ku qoran. Dugsiyo badan ayaa duubi doona dhacdooyinkooda onlaynka ah si mustaqbalka loo daawado oo ay u dhigaan boggooda internetka. Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan la xiriir dugsiga.
Waxbarashada Gaarka ah: IFSP ilaa IEP Kulamada Waalidka ee Onlaynka ah
Haddii aad heysatid ilmo qaata adeegyada waxbarashada khaaska ah ee dugsiga kahor, oo hadda ku jira IFSP, fadlan nagala soo qeybgal wada-hadal ku saabsan hanaanka u wareegida fasalka xanaanada. Kulamada onlaynka ah ayaa hoos ku qoran; duubitaan ayaa sidoo kale la heli doonaa.
25 -ka Febraayo, 6:15pm - 7:45pm (Ingiriisi)
27-ka Febraayo, (Sabti) 10:00 am - 11:30am (Isbaanish)
16-ka Maarso, 6:15 pm - 7:45pm (Isbaanish)
31-ka, Maarso.5:30pm - 7:00pm (Ingiriisi)
RSVP (Fadlan u soo jawaab) (waxtar u leh qorsheynta laakiin looma baahna) Noelle Sisk nsisk@pps.net.
Macluumaad dheeri ah iyo liinkiga kulamada waalidka, fadlan booqo boggeena internetka.
Miyaad qabtaa su'aalo?
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan u diyaargarowga Fasalka Xanaanada www.pps.net/kindergarten ama iimeyl u dir kindergarten@pps.net.
Haddii aad su'aalo ka qabtid hanaanka diiwaangelinta wac:
Wac 503-916-3205 haddii aad ku hadashid Isbaanish, Ingiriisi ama Ruush
Wac 503-916-3584 haddii aad ku hadashid Fitnaamiis
Wac 503-916-3586 haddii aad ku hadashid Soomaali
Ama u soo dir iimeyl: enrollment-office@pps.net